Ukhetho? Kwiveki yokuqala yokufudukela kwi-MacBook Pro | Martech Zone
Ukhetho? Kwiveki yokuqala yokufudukela kwi-MacBook Pro
NgeCawa, Oktobha 29, 2006 Douglas Karr
Okwangoku, sele ugalelwe iMac ngokuchasene neentengiso zePC:
Inyani yile yokuba andiqinisekanga ukuba bayabethelela ukuba yintoni le bayonwabelayo abasebenzisi beMac. Ngokuqinisekileyo zonke i-iLife, i-iMovies, i-iTunes, njl. Kwakhona, akumangalisi ukuba abantu bokudala bathanda ukusebenzisa iMac. Abanye banokuba ngabantu abanjengoAdobe kunye neenkqubo ezinje ngeQuark baqale iMac.
Into endikholelwa ukuba iApple ilahlekile kwezi ntengiso kukuphakama komsebenzisi. Nangona iWindows iguqukile kwaye yalinganisa uninzi lweempawu zika-Apple, kusafuneka zikubambe ngokulula ukusetyenziswa kwazo.
Ndizakubonisa ubudala bam apha, kodwa ndiqale kolu shishino ngokucwangcisa ileli kwi-Programmable Logic Controllers (i-PLCs), ndaya kwi-DOS, ii-PLCs ezidityanisiweyo ukuya kwi-DOS, kwaye zaphuhliswa, zahlanganiswa zaza zaphunyezwa izicelo kwi-Microsoft Windows, IBM OS2 Warp / Warp Server, njl Akuzange kube lula, kodwa ndihlala ndizicel 'umngeni ekufundeni nasekuzameni ukwenza ngokuzenzekelayo nokudibanisa ngakumbi nangakumbi. Ndinamava amaninzi, kwaye ungathi ndingu'Microsoft Guy ', ndiyisebenzise njengesixhobo sam esiphambili kwimisebenzi yam yonke.
I-OSX (Inkqubo yokuSebenza kwe-Mac), ayixinananga, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyisebenzisa, ukwenza ngokwezifiso, ukudibanisa, njl. Ukukuxelela inyani, lelinye lawona maxesha amnandi endakha ndanawo xa ndandingayazi indlela yokufaka Inkqubo. Khange ndiqonde ukuba ndingayitsalela kwifolda yeZicelo. Ngaba awunqweneli ukuba ilula kwiWindows? Sheesh.
Ngokunxibelelana emsebenzini (siyivenkile yakwaMicrosoft), khange ndibenangxaki. Akukho ngxaki yokungena kwinethiwekhi, ukufikelela ngaphandle kwamacingo, usebenzisa iOfisi nokuthumela nokwabelana ngeefayile. Khange ibe buhlungu. Ndinezinto ezifanayo ezisebenza 'xa kunokwenzeka' ndifuna ukuqhuba i-XP… kodwa ndiyikhuphela ngaphandle kweWindows kwiMac (iyamangalisa). Apho ndinokufikelela kwiMicrosoft kunye neMicrosoft Visio.
Ke… igama lam lokuqala liya kuba yi-Elegance. I-Apple yenza umsebenzi omnandi kwindawo entle, elula nebaleka ngokugqibeleleyo. Xa nditshintshile ukusuka kwi-PC ndisiya kwi-PC kwixa elidlulileyo, ngokunyanisekileyo kuthathwe ixesha elininzi kunokuba kufuneka kutshintshele kwi-Mac. Ndiyachukumiseka.
Imikhwa esi-7 yesicelo seWebhu esiphumeleleyo se-2.0
Okt 30, 2006 ngexesha 5:42 AM
Wamkelekile kwihlabathi elimangalisayo leMac 🙂
Ndifumene ukuvezwa kwam okokuqala kwi-Mac kwii-80s zakudala, xa ndabona idemo egxininisa into yokuba iiMac zazinobubele (njengokuthi "Nceda ufake idiski" ngokuchasene "nokufaka idiski"). Xa ndichitha unyaka e-US e-1986, isikolo sasinee-Macs kuphela. Kwakulula kakhulu ukuba bathungelane, kwaye yintoni ikhubalo lokwenza imifanekiso (namhlanje, omnye uya kubiza loo "mifanekiso"). Kangangeminyaka ethile bendisebenza neePC, ubukhulu becala ngesizathu sokuba njengomfundi ndingenakukwazi ukuhlawula iMac ngelo xesha. Ke kwakhona bendineMac entle (5200), ebingaphambi kwayo, nangona ingaphumelelanga, yeMac. Kwaye kwakhona, ukuphuma kweWindows XP, ndalingwa ukuba ndithenge iLaptop yakwaSony. Ayisiyiyo kuphela inkxaso yenkxaso yobuchwephesha, ngelo xesha ndaqala ukwenza imali ngevidiyo, kwaye kwafuneka ndiqale kwakhona i-PC yakho iyure nganye kunye nomthengi ohleli ecaleni kwakho, yayingengawo amava amnandi. Ke sitsibe kwi-Final Cut bandwaggon, esele inenguqulo ye-1.25. Khange uzisole kube kanye. Namhlanje siyi-2 eofisini, kwaye sineeMac ezi-5; Yonke into esuka kwi-Mac mini encinci, inqaba endala ye-G4 (ungacinga ukuba i-PC eneminyaka eli-7 ubudala isabonakala ilungile, kwaye isasebenza?) Ukuya kwi-G5 eneeprosesa ezi-4.
Okukwintsusa: IiMacs zinokubiza ngaphezulu kwisigaba sokuqala, kodwa zisindisa kakhulu kwiindleko zokuvelisa, ziyonwabisa ukusebenza nazo, zikhuselekile kwiintsholongwane. Basebenza nje.